XUKUUMADDA SOMALILAND OO DAWLADDA XAMAR UGA DIGTAY INAY SOO FARO-GELISO XEERARKEEDDA IS-GAADHSIINTA | Maalmahanews
XUKUUMADDA SOMALILAND OO DAWLADDA XAMAR UGA DIGTAY INAY SOO FARO-GELISO XEERARKEEDDA IS-GAADHSIINTA
Hargaysa (Maalimahanews.com)- Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka hadashay xeerka lagu maamullo is-gaadhsiinta oo ay dhawaan ansixiyeen baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya, kaasi oo ay sheegtay in aanu wax saamayn ah ku yeelan doonin.
Wasiirka wasaaradda Boostadda iyo Is-gaadhsiinta jamhuuriyadda Somaliland Mustafe Faarax Abraar, oo shalay warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaaladda Hargaysa, waxa uu sheegay in dawladda Somaliland ay u madax banaan tahay xeerarka ay ku maamusho is-gaadhsiinteedda.
“Wasiirka Boosaha Soomaaliya wuxuu dhawaan soo saaray xeerka is-gaadhsiinta, kaasi oo uu sheegay in Somaliland-na ay qayb ka tahay. Waxaan leenahay wasiirka boosaha Soomaaliya, Somaliland waa dal u madax banaan xeerarkeedda iyo shuruucdeedda, waxaanay leedahay goleyaal sharci-dejin ah oo soo saara shuruucdeedda”ayuu yidhi Mustafe Faarax Abraar.
Wasiirka Boosaha iyo is-gaadhsiinta Somaliland ayaa uga digay dawladda federaalka Soomaaliya in ay wax farro-gelin ah ku soo samayso sharciyadeedda dhinaca is-gaadhsiinta. Waxaanu yidhi “Waxaan uga digaynaa dawladda federaalka Soomaaliya in ay wax farro-gelin ah ama gaco-jug layn ah ay noola yimaadaan, sharcigayaga ayaanu ku maamulnaa is-gaadhsiintayadda. Wasiirka Boosaha Soomaaliya Xamar, waxaan leeyahay ayaad is-gaadhsiinteedda xukuntaaye, Xamar uun ku ekow”.
Geesta kale wasiirka boosaha ayaa soo dhaweeyay go’aankii ay maxkamadda sare ee Somaliland ka soo saartay muranka ka dhashay doorashaddii guddoomiyaha golaha Wakiiladda. “Waxaan soo dhawaynayaa go’aankii ay maxkamadda sare ka soo saartay murankii baarlamaanka. Waxa kale oo aan hambalyaynayaa xildhibaanadu siday u qaateen go’aankaasi ahaa in ay iyagu dhexdoodda xaliyaan khilaafkaasi”ayuu yidhi wasiirku.
Sidoo kale wasiirka boosaha ayaa ku eedeeyay in ay sharaftii iyo magacii bulshadda Awdal meel kaga dhaceen xildhibaano hore uga tirsanaa xisbiga Kulmiye oo dhawaan sheegay in ay ka baxeen xisbigaasi. Waxaanu yidhi “Waxaan si gaar ah isku dul taagayaa xildhibaanadda reer Awdal, waxaanan leeyahay Ragg qawl baa xidha, dumar-na meher baa xidha.
Xildhibaanku xisbiga uu doonno in uu gallo wuu u madax banaan yahay, in ninka uu rabo uu u codeeyana wuu u madax banaan yahay, laakiin waxaan meesha qaban in aad kolba cid balan la gashaan.
Waa in ay ogaadaan in ay huwan yihiin sharaftii gobolka iyo magacii dadkii soo doortay. Waxaanan leeyahay wax u tudha. Reer Awdal sidaas ma aha, waa dad qawl leh, go’aana leh, waana dad siyaasadda cidii ay raacaan la socda oo ku tiirsan, balse aan kolba dhinac u cararin”.